Fananganana sandaly manome fanampiana an'ireo marefo indrindra
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Fananganana sandaly manome fanampiana an'ireo marefo indrindra
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Hatramin'ny nanolorana ny valan'aretina COVID-19 tany amoron'ny Karaiba, ny Fondation Sandals dia nanokana loharanom-pahalalana ary nandrisika ny fanohanan'ny governemanta, ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, ary ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny orinasa hanamafisana ny tobim-pahasalamana, hanohana ireo mpiasa an-tsokosoko, ary hanome fanampiana ireo marefo indrindra ao anatin'izany ireo zokiolona sy fianakaviana any amin'ireo vondrom-piarahamonina sahirana sy fizahan-tany.
Fanamafisana ny serivisy ara-pahasalamana
Ny Sandals Foundation dia nanolotra $ 5 tapitrisa $ JM ho an'ny Private Sector Organisation of Jamaica (PSOJ) satria nanangona vola mitentina 150 tapitrisa dolara izy ireo hividianana ventilator ho an'ny hopitaly nosafidian'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Fahasalamana (MOHW) ao amin'ny firenena.
Tamin'ny alàlan'ny fanomezana malala-tanana avy amin'ny United States Company, Tito's Homemade Vodka, Sandals Foundation dia nanamboatra efitrano fitsaboana tsy misy fitsaboana ho an'ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ao amin'ny Hopitaly Regional St. Ann's Bay any Jamaika izay hamaly ireo marary Covid-19. Ny efitrano fandraisam-bahiny dia misy ampahefatry ny torimaso miaraka amina fandriana kambana, toerana malalaka misy seza telo azo soloina sy fahita lavitra ary efitrano fisakafoanana misy microwave, kettle elektronika, vata fampangatsiahana ary latabatra fisakafoana misy seza efatra.
Sandals Foundation dia namatsy sakafo sy zava-pisotro ho an'ny mpitsabo 70 miampy ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy izay nandany iray andro tamina asa fitsaboana quarantine vonjy taitra tany Annotto Bay, St. Mary, Jamaika. Nanampy ireo ekipa laharana voalohany ireo sakafo ireo rehefa nanandrana olona an-jatony izy ireo, nanao fitsaboana ary nanao hetsika fanentanana mba hanomezana hery ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina afaka manampy amin'ny famonoana ny fihanaky ny virus.
Manohana ny vondrom-piarahamonina
Ny Sandals Foundation koa dia nanolotra vola mitentina 2 tapitrisa $ ho an'ny PSOJ COVID-19 Response Fund hanohanana ny filaminan'ny sakafo sy ny filàna ara-tsakafo ao Jamaika. Ny Fund dia fiaraha-miasa amin'ny sehatra maro miaraka amin'ny Council of Voluntary Social Services (CVSS), American Friends of Jamaica izay manetsiketsika sy mizara fonosana fikarakarana isan-kerinandro amin'ireo olom-pirenena marefo sy vondrom-piarahamonina tsy dia misy ilana azy.
Ao anatin'ny fanomezana 2 tapitrisa $ PSOJ COVID-19 Jamaica Response Fund, fonosana fikarakarana 700 eo ho eo no natolotra mba hitondra fahatsapana fanantenana amin'ny fianakaviana ao St. James, Jamaika. Ireo hetsika dia nanjary azo tamin'ny alàlan'ny fanampian'ny mpiara-miasa fanampiny toy ny Food for the Poor, the Jamaica Constabulary Force, United Way of Jamaica and Red Cross Jamaica.
Miara-miasa amin'ireo Komitin'ny Fampandrosoana ny Vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy fiaraha-miasa amin'ny Sandals South Coast Resort, dia nividy fonosana enta-dimampolo (50) avy amin'ny Lasco Chin Foundation izahay ary nozaraina ho an'ireo zokiolona ao amin'ny vondrom-piarahamonina Fustic Grove, Crawford, Hill Top, Dalintober ary Sandy Ground any St. Elizabeth, Jamaika.
Tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny Sandals Negril sy ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny Hanover Poor Relief, ny Justices of the Peace sy ny mpitondra fivavahana, ny fonosana fikarakarana dia novidiana avy amin'ny Lasco Chin Foundation ary natolotra an'ireo zokiolona, ​​tsy manan-kialofana ary mahantra voasoratra anarana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra lalina ao amin'ny Chester Castle sy March Town any Hanover, vondrom-piarahamonina Moreland Hill any Westmoreland ary ny fiarahamonina Red Bank sy Genus any St. Elizabeth, Jamaika.
Ny Foundation dia nanitatra fanampiana ara-bola ho an'ireo nahazo fanabeazana ambaratonga faharoa, programa momba ny vatsim-pianarana "Care for Kids" hanampiana ny fianakaviany hihaona amin'ny filan-tsakafo sy ny fiahiany mandritra ity fotoana ity.
Ny Sandals Foundation dia niditra ho mpikambana ao amin'ny Church of the Ebenezer Union Baptist Church any Exuma, Bahamas mba hamatsy vola ny familiana sakafo. Ny famatsiam-bola ataonay dia hanome voucher sakafo hamelomana fianakaviana marefo 50.
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny Hanover Poor Relief sy ny mpitsara momba ny fandriam-pahalemana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Westmoreland sy St. Elizabeth, fonosana fikarakarana 50 no novidina avy amin'ny Lasco Chin Foundation ary natolotra an'ireo zokiolona, ​​tsy manan-kialofana ary manana fisoratana anarana mahantra any amin'ireo tanàna ambanivohitra lalina ao amin'ny Chester Castle , March Town, Moreland Hill, Red Bank ary Genus.
Fampiasam-bola amin'ny fanabeazana sy fivelomana
Mba hanohanana ireo filàna mianatra an-tserasera sy lavitra amin'ny mpandray anjara amin'ny mpiara-miasa aminay, Grow Well Golf Program any St. Lucia, dia novidiana ny solosaina finday mba hanampiana ny tanora hijanona amin'ny làlana tsara amin'ny fianarany akademika.
Ny Sandals Foundation koa dia manampy amin'ny fanamorana ny filan'ny fahalalana lavitra ny mpandray vatsim-pianarana "Care for Kids" amin'ny alàlan'ny fanomezana fitaovana solosaina takelaka sy ny vidin'ny fifandraisan-davitra mba hahafahan'ny mpianatra miditra amin'ny internet ary manohy ny fianarany.
Izahay dia manome famatsiam-bola ho an'ny olona izay ao anatin'ny faratampon'ny famatsiam-bola ho an'ireo artisanina eo an-toerana miasa ao anatin'ny sehatry ny fizahan-tany. Ireo mpamatsy loharanon-karena voalohany ireo dia nisy fiantraikany ratsy tamin'ny fivelomany noho ny fanidiana ny indostrian'ny fizahantany sy ny fijanonana amidy amin'ireo mpanao asa tanana izay mamorona vokatra ho an'ny hotely fandraisam-bahiny. Ny fanampiana ara-bola dia manampy ny mpiasa eo amin'ny 50 eo amin'ny famatsiana entana ilaina amin'ny tena sy ny fianakaviany.
Fahafahana "ho sitrana tsara kokoa" amin'ny ho avy
Ny Sandals Foundation dia hanohy hamaly ireo filàna ara-tsosialy any Karaiba amin'ny alàlan'ny:
Fanamafisana ny fahafahan'ny hopitaly, tobim-pitsaboana ary serivisy fitsaboana any an-toerana amin'ny fiarahamonina miankina amin'ny fizahan-tany;
Manome izay hahasoa ny zokiolona sy marefo indrindra izay miankina amin'ny fiveloman'ny mpiasa hotely ho an'ny fivelomany; ary
Ao anatin'ny fanampiana ara-bola ho an'ny paikady maharitra "maharitra any an-tsekoly" fanampiana ny ankizy / paroan'ny mpiasa ao amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Ireo vatsim-pianarana ireo dia ho azon'ny mpangataka na efa niasa na tsia tany amin'ny Sandals na Beach Resorts.
Manasa anao izahay hivoatra hatrany amin'ny asanay amin'ny alàlan'ny fanarahana anay Facebook, Instagram ary Twitter.